IZOQALA ohlelweni Isidlo Sasekuseni olwethulwa nguNongcebo McKenzie noTshatha namhlanje imigubho yeminyaka engu-60 kwasungulwa Ukhozi FM
FANELESIBONGE BENGU | June 1, 2020
UMSAKAZO ohamba phambili ngabalaleli, Ukhozi FM, ugubha iminyaka engu-60 namhlanje ngokukhumbuza abalaleli lapho usuka khona.
UKhozi lwaqala ukusakaza ngoJuni 1 ngo-1960 kusasakaza uK.E Masinga umgwaqo lapho umsakazo ukhona eThekwini oqanjwe ngaye.
Obambe kwesokhulumela iSABC, uMmoni Seapolelo uthe izinhlelo kusasa zizokhumbuza abalaleli lapho baqala khona kusukela emculweni, ingqephu nokunye.
“Izinhlelo zizoqala ngeSidlo Sasekuseni esizokhumbuza abalaleli iminyaka yo-1960. IJabul’ujule izobheka eyo-1970, i1223 Café ibheke eyo-1980, iSisonke Drive eyo1990, iSithakela Isizwe ibheke eyo-2000 bese kuthi i-Akulalwa ibheke kusukela ku-2010 kuze kube yimanje,” kusho uMmoni.
Uthe banenqwaba yezipho abazozinikeza abalaleli usuku lonke.
“Isiteshi sizoba nomkhankaso lapho abalaleli kumele bathumele amaSMS athi “Ukhozi FM 60” ku-33665 ukuze bazibeke ethubeni lokuwina uR60 000. Owinile uzomenyezelwa ngemuva kwezinsuku ezingu-60, ngoJulayi 30.”
Umphathi wesiteshi obambile uSbongi Ngcobo uthe bajabule ngokufika kule minyaka nokuthi bayigubhe nabalaleli babo.
“Siyazi ukuthi le mpumelelo besingeke siyizuze ngaphandle kwabalaleli abavuka nsuku zonke basikhethe kuzona zonke iziteshi abangazilalela,” kusho uSbongi. Uthe bazoqhubeka bazise abalaleli, babafundise babajabulise.